Knowledges Zone: မိမိ Folder လေးတွေကို back ground လှလှလေးတွေပြောင်းကြရအောင်........ window XP အတွက်ပဲနော်
မိမိ Folder လေးတွေကို back ground လှလှလေးတွေပြောင်းကြရအောင်........ window XP အတွက်ပဲနော်
Windowpaper XP v1.01 Stable Release
Download Windowpaper XP to find out why "it makesabetter door than your window." ™ (2.09 MB / 2140 KB)
Bilingual? We need your help! Download the free SodaBush Language Pack Builder and send us languages you create so everyone can enjoy them! :)
Provided by SodaBush
Provided by A&A
Provided by 苏永刚译制
Provided by Yahoo Babelfish
Provided by fero74
Windowpapers are just like your normal wallpapers, the only difference is that windowpapers tend to be smaller so they fit better intoawindow or folder. They can be in any of your favorite formats like GIF, JPEG, BMP, etc.
Haveafavorite windowpaper you like to use? Send it to us and we may post it for others to download!
PC က window XP ဆိုရင် ကျွှန်တော်ပေးလိုက် တဲ့ software လေးကို စတော်........ လိုက်ပြီး သုံးကြည့်လိုက်ပါအုံး......... မိမိ folder လေးကို background ပြောင်းကြအောင်လေ....... ကဲ....အားလုံးပဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ......... ရှိပြီးသားသူငယ်ချင်းတွေကတော့ မသုံးချင်လည်းရပါတယ်ဗျာ.......
3D desktop for you !!
ကွန်ပျုတာကို ထမင်းမေ့ဟင်းမေ့ သုံးတက်သူတွေအတွက်
Youtube ဝက်ဆိုဒ်မှ ဗွီဒီယိုတွေကို ယူနည်း
Avira AntiVir Personal (10.0.0.609)
PES 2011- RELOADED + Crack
Windows7Ultimate 7600 Multi (x86)
Gtalk မှအလိုလျှောက် ပြန်ဖြေပေးသော Software
သူငယ်ချင်းတို့ ရဲ့G-mail မှာ ဒီလိုလေးနဲ့စ၀င်ချင်...
Don't Sleep & Inpaint
သောက်ရေသန့်ဗူး - ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးတစ်ခွက်လား၊ အဆ...
DriverPack Solution 10.6 Solution x32-x64
Google Home Page ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်နာမည် ပြင်ကြရ...
သီချင်း၊ ဗွီဒီယို၊ စာအုပ်များ ကို Nero Bruning ဖြင...
၀င်းဒိုးတင်းပြီးရင် သွားသင့်တဲ့ Site လမ်းညွှန်........
network မှတဆင့် ပြုပြင်ခြင်းတဲ့...
System Restore အကြောင်း
Gmail မှာ .exe ဖိုင် တွဲပို့နည်း
Windows Vista x64 Retail
မေ့နေသော alt နှင့် keys များ
ကိုယ်ကြည့်နေတဲ့ web page တွေကို pdf နဲ့ သိမ်းချင်ရ...
Snow Angels for Windows 7
Magic Christmas Theme
ကိုယ့်ရဲ့ desktop ကိုဘယ်လိုသုံးချင်လဲ (Windows7 on...
Drop box လေးကို အသုံးပြုခြင်း
Microsoft security essentials 2.0 (new update)
Ashampoo® Slideshow Studio HD
ခရစ္စမတ် အထူး Special လက်ဆောင်လေးပါ ( အထူး Special ...
မိမိမျက်နှာနဲ့ ကနေတဲ့ santa claus လေး လုပ်ကြရအောင်...
Desktop မှာ မြန်မာလိုရေးကြရအောင်
♦ ကွန်ပျူတာလေးပိုလှအောင် အလှဆင်ကြမယ်နော် ♦
Online Radio ပြုလုပ်နည်းလေး
Windows7အကြောင်း
gtalk online and Facebook ပေါ်ကနေ့ Gold ဈေးနှုန်း ...
Wedding Album Maker Gold 3.10 Portable ( 25.44 MB)...
Gtalk တွင် မိမိနားထောင်နေသောသီချင်းပေါ်အောင် ဘယ်လို...
ကင်ဆာပျောက်တယ်လို့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတဲ့ ဂျုံမြက်နုအြေ...
Firefox မှာ အပ်ပြီး youtube မှ Mp4 Dowload လုပ်နည်...
(ရေနွေးကြမ်း နှင့် နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း...
Desktop ပေါ်မှ Icon မှ ပြသနာ
မိမိ Folder လေးတွေကို back ground လှလှလေးတွေပြောင်...
KMPlayer 2.9.4.1437 Fixed Final Portable
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ သုံးကြရအောင်
Folder lock ချထားတာကို Password မသိပဲနဲ့ဖောက်ကြမယ်...
ဘီပိုးကို နိုင်သော ဆေးဖက်ဝင် အပင်
မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတရစေဖို့ အတူတူမအိပ်သင့်တဲ့ အ...
internet cafe' မှာ ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတိုင်းလက်ဆေးပါ...
ဆယ်ကျော်သက်တို့အတွက် အကျင့်ကောင်း (၇) ရပ်